သတင်း - Hanukeii
အမျိုးအစားအားလုံး လက်ဆောင် Entretenimiento လူထု လူနေမှုပုံစံစတဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းများ အသိပညာ သဘောထားတွေ ခရီးသွားခြင်းနှင့်နေရာများ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ 'အနက်ရောင်အသစ်' ဖြစ်သောကြောင့် ဦး ထုပ်များသို့အသံများကြားရသည်။
သင်ခဏလောက်စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘယ်လိုလဲ အဖုံး Hanukeii, မင်းရဲ့အမျိုးအစား ဦး ထုပ်ကိုဘယ်လို ၀ တ်ရမလဲဆိုတာအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေနဲ့လမ်းညွှန်ကိုငါတို့ပြချင်တယ် ကုန်တင်ကား မင်းရဲ့တစ်နေ့တာမှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်ယခုအခါလမ်းပုံစံ၏ 'အနက်ရောင်အသစ်' ဖြစ်သည့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
နေကာမျက်မှန်မပါတဲ့နာမည်ကြီး ၁၀ ယောက်
ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဂီတနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလောကမှဤဇာတ်ကောင်များ၏နောက်ကွယ်တွင်အဘယ်အရာရှိသနည်း၊ သူတို့၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ကိုမျက်မှန်၌တွေ့သောသူ။ သူတို့သုံးတဲ့တကယ့်စိတ်ရင်းကဘာလဲ gafas က de sol ညဘက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ဖြေရှင်းပြီးသောပဟေိတစ်ခုလုံး။ မင်းအဲဒါကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဖတ်ပါ။
Los Angeles, CA တွင်အများဆုံး instagrammable နေရာ ၁၀ ခု
ငါတို့ခရီးတွေသွားနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုမျှဝေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲ။ ငါတို့ကမင်းကိုပြောသမျှကိုမစောင့်နိုင်ဘူး။ Los Angeles, Los Angeles, ငါတို့အကြိုက်ဆုံးမြို့များထဲမှအတိုဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သော၊ instagrammable နေရာများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Californiaမရ။ ငါတို့ကမင်းကိုဒီအံ့သြစရာအကြောင်းအားလုံးကိုပြောပြမယ် အစက်အပြောက် ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ အဖျားမင်းသူ့ကိုသွားလည်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်
Alexandra Pereira: သြဇာ၊ ဖက်ရှင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု။
En Hanukeii ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖက်ရှင်လောက၊ ကွန်ယက်များနှင့်ကမ္ဘာမှကိုးကားချက်များကိုဝေမျှလိုသည် လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာငါတို့ကမင်းကိုအရာအားလုံးကိုမပြောပြချင်ဘဲ Hispaniola အကြောင်းသိချင်တဲ့အချက်အချို့ကိုပြောပြချင်တယ် Alexandra Pereira ဥရောပ၌ဘလော့ဂါများ၏ရှေ့ပြေး၊ ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်လာချိန် မှစ၍ လက်လှမ်းမီသည်။ နောက်ပြီးသူ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲသိချင်လား gafas က de sol အကြိုက်ဆုံး? သေချာတယ်မင်းဒါကိုစိတ်ကူးယဉ်နေပြီ။
သင်သည်တိရစ္ဆာန်ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်လျှင်သင်သည်ရှုထောင့်ပေါင်းများစွာ၌သူတို့နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီတွင်တိရစ္ဆာန်စိတ်တစ်ခုရှိသည်ဟုပြောပါစေ။ မင်းငါတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမင်းမသိဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုအရှိဆုံးဖော်ထုတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်ကဘာလဲဆိုတာမင်းသိချင်ရင်ငါတို့ကမင်းကိုတိရိစ္ဆာန်တွေအပြင်မင်းကိုသေချာပေါက်ဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဦး ထုပ်!
မင်းလမ်းပေါ်ကိုဆင်းပြီးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းရှေ့မှာကခုန်နေတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းမြင်နေလား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းလုပ်နေတာလား စာစောင်ကို Instagram နှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆို စိန်ခေါ်မှုထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေလုပ်နေကြတယ်။ ငါတို့ပြောနေတာမင်းသိလား။ အကယ်စင်စစ်ထိုအကြောင်းအရာအားလုံးသည်သေချာသည် TikTok သင်ဤအက်ပ်အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်ဖြစ်လာပါ ဗိုင်းရပ်စ်ငါတို့ကမင်း algorithm ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ့်လှည့်ကွက်အချို့ကိုသင်ယူလာပေးတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
Venice ကမ်းခြေ၊ CA၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့်ဘဝ၏ဝန်းရံမှု
စက်တင်ဘာလ 03, 2021
နေရာတွေရှိတယ်၊ အချိန်လေးများ၊ လူများနှင့်သင်တန်း ... Caps! ထားပါတော့ သူတို့ကငါတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာစွဲကျန်နေခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်! ဒီတခါကမ်းခြေကိုသင်ပိုသွားလည်တဲ့အခါသင်တွေ့မြင်ရမယ့်အချက်ငါးချက်နဲ့လမ်းညွှန်ကိုသင်ယူလာခဲ့တယ် လွတ်လပ်ပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်နေထိုင်သောသူများပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏စတိုင်လ်နှင့်လေထုနှင့်အတူ ဗင်းနစ်သဲသောင်ပြင်မရ။ ၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှထူးခြားစေသည်ကို၎င်း၊ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သနည်းကိုရှာဖွေပါ Hanukeii.
သင်္ဘောသဖန်းသီးရေခဲမုန့် - အလွန်သဘာဝသွေးဆောင်မှု
စက်တင်ဘာလ 02, 2021
နွေရာသီ၊ အပူနှင့် ... ရေခဲမုန့်! သဘာ ၀ ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ရေခဲမုန့်စားသုံးရန်သင်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ယခုတကြိမ်သင်တို့သည်စင်ကြယ်သောအသီး၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးရေခဲမုန့်။ ဒီနွေရာသီမှာအအေးခံပြီးပျော်မွေ့ပါ #ခြေဖဝါးဘဝ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူလက်၌လက်။ သူတို့ဘာအတွက်ကောင်းခဲ့တာလဲ
ဘုရင်မ Day သည်သမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် - Live Aid 1985
ဘုရင်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။ဘုရင်မကြီးကအဲဒါကိုပြောင်းလဲစေမယ့်ပွဲတစ်ခုရဲ့ဇက်ကိုကိုင်ပြီးဂီတရဲ့နေထိုင်မှုခံစားချက်ကပြောင်းသွားတယ် ဘဝဖျော်ဖြေပွဲ ကြောင်းဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်လာလိမ့်မယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမည်သို့မည်ပုံကျော်လွန်သည်ဆိုသည့်တင်ဆက်မှုမျိုးမရှိခဲ့ပါ မာကျူရီ ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်ပရိသတ်သန်း ၁၅၀၀ ၏စိတ်နှလုံးကိုလှုပ်နှိုးခဲ့သည်။ သင်၎င်းကိုပြန်လည်ခံစားလိုပါသလား။
Lombard Street နှင့် San Francisco, CA သို့သွားလျှင်မလွတ်သင့်သောအခြားနေရာ ၁၀ ခု
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပင်လယ်အော်ရှေ့မှာမင်းဘာစားချင်လဲ Dungenes ဂဏန်း ပြီးတော့ဒီမြို့ရဲ့နေရာတိုင်းကိုလည်ပတ်ဖို့ China Town ကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဒီကိုသွားသင့်တယ် Lombard လမ်း? San Francisco ကိုအပန်းဖြေခရီးသွားရင်သိဖို့ထိုက်တန်တဲ့နေရာ ၁၀ ခုရဲ့တရားဝင်စာရင်းကိုငါတို့ပြချင်တယ်၊ ငါတို့ကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တွေထဲကမင်းကိုပြောပြမယ်။ Hanukeiiမရ။ သင်သိလိုပါသလား။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး၌သင်၏လာမယ့်နေကာမျက်မှန်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည့်အချိန်၌သင့်လက်ထဲရှိလမ်းညွှန်စာအုပ်အပြည့်အစုံကိုယူလာသည်။ Hanukeii။ အခြားဘယ်သူမှသင့်အားမပြောသောထိုအကြံဥာဏ်များအားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား။ ငါတို့ကိုဖတ်ပါ။
ဖက်ရှင်သမိုင်းမှာ4အထင်ကရနေကာမျက်မှန်
မျက်မှန်တစ်လုံး၏နောက်ကွယ်တွင်အလွန်ကြီးစွာသောမျက်မှန်ရှိသည် သမိုင်း။ စင်စစ်အားဖြင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သောမော်ဒယ်အချို့သည်ဖျော်ဖြေရေးလောကတွင်အထင်ကရအခိုက်အတန့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှခံနိုင်ရည်ရှိလာနိုင်ပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားသည်။ သူတို့အားစတိုင်များကဘာလဲဆိုတာသင်ပြပါ gafas က de sol မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ထူထောင်ခဲ့ကြပြီးအကောင်းဆုံးအရာမှာသူတို့ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည် Hanukeii.
ဂူ၊ စျေးနှင့်အိမ်နီးချင်းများ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်သောနေရာများ
ကြီးမြတ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအမြဲရှိတယ်။ ငါတို့အဘို့အရှိသေး၏ သောနေရာများ ငါတို့မှော်နှင့်အတူ လှုံဆော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည် gafas။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာကျွန်တော်တို့ဟာချီလီရှိ Red Lagoons မှကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစျေးကွက်များ၏ထောင့်များနှင့်စကားပြောမည်။ မင်းအဲဒါကိုလက်လွတ်မသွားဘူးလား။
Qiယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကျင့်သုံးပြီး၊ ကွန်ယက်များတွင်နာမည်ကျော်ကြားမှုရရှိသောယောဂအမျိုးအစား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လို့ပဲ စွမ်းအား, ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်လက်ခံ။ စူပါနည်းပညာများရရှိပြီးသည့်နောက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လြှော့ပေါ့ခွငျး.
ကျူးဘား - အတိတ်ကာလခရီးစဉ် - ကျွန်းသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်အတက်ကြွဆုံးနေရာများ
သဲသောင်ပြင်, လေပြေနှင့်ပင်လယ်! နွေရာသီမှာကာရစ်ဘီယံမှာပျော်မွေ့ကြမယ် အချိန် အေးခဲပုံရသည်။ ဟုတ်ကဲ့! ငါတို့ပြောနေတာ ကျူးဘား, သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပြည့်အဝ, ဒီမှော်နေရာ။ ဤလမ်းညွှန်တွင်သင်၏ GIs တွင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည့်အကောင်းဆုံးနေရာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ပုံပြင်များ သငျသညျရှိတခါ။ စကားမစပ်, သင့်မျက်မှန်ကိုမမေ့ပါနှင့် Hanukeiiသင်သည်ထိုသူတို့ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောအရာများကိုဖန်တီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့မှဖော်ထုတ်ခံရပြီးမှုတ်သွင်းခံထားရသောအရာအားလုံးကိုပြောပြချင်ပါသည် Hanukeii။ ဒီတစ်ခါတော့ဒီနေရာတွေ၊ အက္ခရာတွေ၊ ငါတို့မျက်မှန်ဒီဇိုင်းတွေကိုပုံဖော်တဲ့အမှတ်တရတွေအကြောင်းပြောကြမယ် ပစိဖိတ်, Hyde y Laguna။ သူတို့ဘာတွေရှိလဲသိချင်လား ဆက်ဖတ်ပါ
၄ Keto အစားအစာပေါ် အခြေခံ၍ ကျန်းမာသောနံနက်စာ။
နွေရာသီရောက်နေပြီ။ bikini လုပ်ငန်းစတင်ရန်နောက်ကျလွန်းသည်ဟုသင်ခံစားရလျှင်စိတ်အေးအေးထားပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်ကျန်းမာအရသာပစ္စည်းကိုဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ Keto အစားအစာကို အခြေခံ၍ သင်၏နံနက်စာနှင့်အတူဤချက်ပြုတ်နည်းလေးချက်ဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ကမ်းခြေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသောကြောင့်ဤ post ကိုသိမ်းပါ။
အာရှ၊ ကာရေဘီယန်၊ Oceania နှင့်ဥရောပ - မျိုးစိတ်သုံးမျိုးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏နေအိမ်။
မျိုးစိတ်တစ်ခုချင်းစီသည်ထူးခြားမှုရှိသကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပတ် ၀ န်းကျင်လည်းရှိသည်။ သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေများကိုအာမခံပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထမ်းရွက် ပန်ဒါအဆိုပါ လင်းပိုင် နှင့် သမင် သူတို့ကဒီနေ့ငါတို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေပါ။ မင်းတို့အားသူတို့၏နေရင်းဒေသများအကြောင်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီတိရိစ္ဆာန်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သလဲ ဦး ထုပ်.
San Francisco ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ် & ဒါ cal
အမှုအရာများထက်အတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းခြင်းကပိုကောင်းသည်ဟုသမ္မာတရားကိုမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခရီးစဉ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပြည့်နှက်နေသည် စိတ်ဝင်စားခြင်း။ ထိုသို့ငါတို့၌ရှိ၏ Hanukeiiငါတို့ဟာအခုအချိန်မှာနေပြီးငါတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပျံသန်းစေခဲ့တယ်။ ဤအခါသမယတွင်ဖြစ်ခြင်း၊ California နှင့်၎င်း၏ထောင့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မှန်တာဝန်ရှိသည် Lombard အဘိဓါန်, Soma နှင့် Southcal ။ မင်းဒါကိုလက်လွတ်မသွားဘူးလား။
Koalas နှင့် Zebras
En Hanukeii သဘာဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးသောအရာအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သည်။ #ခြေဖဝါးဘဝ မဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့စုဆောင်းထားတာတွေကိုတင်ဆက်ရတာအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ Hanukeii: မှုတ်သွင်း တိရိစ္ဆာန်ဘဝ။ ဤအခါသမယတွင်ဇာတ်ကောင်များသည် Zebra နှင့် Koala Caps တို့ဖြစ်သည်။ Caps တွေကမမြင်ရအောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်။ တဖန်သင်တို့၊
ဇူလိုင်လ 05, 2021
နွေရာသီရောက်ရင် Hanukeii ရှေ့တန်း၌တည်ရှိ၏ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့နောက်ဆုံးရေးသားထားတာကိုပြထားတယ် သဘောထားတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေရာသီနေကာမျက်မှန်မော်ဒယ်လ် ၃ ခုရဲ့လက်ထဲကနေဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ Hyde အနက်ရောင်, လိပ်ဂွ y ပစိဖိတ်အနက်ရောင်။ သူတို့ကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီဟာကဘာတွေထူးခြားစေသလဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
ဇူလိုင်လ 02, 2021
မင်းမျက်မှန်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာမင်းသိလား Hanukeii? ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင်နေကာမျက်မှန်မော်ဒယ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိအလုပ်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပြောပြပါမည် Hanukeii.
ဇွန်လ 28, 2021
ဒီနွေရာသီမှာမင်းရဲ့မျက်မှန်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။ အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်ကဲ့၊ မင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးကျူးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေထက်၊ နေ၊ ကမ်းခြေ၊ ရေကန်နှင့်အစီအစဉ်များထက်ယခုအချိန်သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ပင်စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီနေကာမျက်မှန်ခေတ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်သိလိုပါသလား။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကိုပြော!
ဇွန်လ 23, 2021
နွေရာသီမှကြိုဆိုပါတယ် သင့်ရဲ့ကမ်းခြေအားလပ်ရက်အတွက်အရာအားလုံးအဆင်သင့်ရှိနေပြီဆိုရင်ကော။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုယနေ့လက်လွတ်မနိုင်။ မင်းကိုသင်ပေးတယ် အကောင်းဆုံးကမ်းခြေအရက်ဆိုင် ၅ ခု စတိုင်လ်နဲ့သက်တောင့်သက်သာနေတဲ့စပိန်နိုင်ငံမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အပြင်နေကာမျက်မှန်နဲ့ပါတွေ့နိုင်တယ် Hanukeii.
Spaghetti Carbonara - သမိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့စာရွက်
ဇွန်လ 18, 2021
ထာဝရcittà ... ခရီးသွားခြင်းနှင့်နေရာအသစ်များနှင့်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုများကြောင့်အရူးအမူးဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အီတလီအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ Mamma mia! ။ ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်ခေါက်ဆွဲစားရန်နည်းလမ်းထောင်ပေါင်းများစွာအနက်မှတစ်ခုအားအထူးရည်ရွယ်သည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုယူလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ carbonara, ငါတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများအားလုံးကိုသင်တို့အားပြောပြပါမည်။
ဘီယာကြက်သား - သင်၏ guests ည့်သည်များကိုအံ့အားသင့်စေပြီးအစဉ်အလာနှင့်အတူစာရွက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ
၏ဂျာမန်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အစဉ်အလာ Oktoberfest ချက်ပြုတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဟင်းလျာများကိုဒီအစားအစာကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်။ ဒါကပါ ဘီယာ ၎င်းသည်အသားအမျိုးမျိုးအတွက် marinade အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ကြက်သားဒါဟာရိုးရှင်းစွာအံ့မခန်းပါ! ဒါကြောင့်ငါတို့ wonderful ည့်သည်တွေကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေဖို့သင်လိုက်နာရမယ့်ခြေလှမ်းအားလုံးပါ ၀ င်တဲ့ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်ကိုသင့်အားပြချင်ပါတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံး Instagram ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း application များကိုရှာဖွေပါ
သင်သည်သင်၏ Instagram ၌ရှိကြောင်း၊ သင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုတွေ့မြင်ရပြီးသင်၏အဆက်အသွယ်များကိုထိုကဲ့သို့သင်ကဲ့သို့လှုံ့ဆော်ခံရရန်သင်အလိုရှိသည်လား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင် Instagram နှင့်ပတ်သက်သောဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုကိုငါယူလာပြီ ပုံပြင်များ သင့်အကြိုက်ဆုံးသြဇာ၏။
သင့်ရဲ့ပစိဖိတ်မျက်မှန်ပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လို Hanukeii Hailey Baldwin
အ gafas က de sol အမျိုးအစား ကြောင်မျက်လုံး ကဲ့သို့ ပစိဖိတ် Hanukeii ၎င်းသည်ဝတ်ဆင်သူများအားအမြဲဆန်းကြယ်။ ကြော့ရှင်းသောပုံစံကိုအမြဲပေးစွမ်းလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာခင်ဗျားကိုနည်းလမ်းသုံးခုတင်ပြထားပါတယ် ပေါင်းစပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု ပစိဖိတ် အများဆုံးအမေရိကန်မော်ဒယ်နှင့်တင်ပြ၏စတိုင်ကိုအောက်ပါ ထိပ်တန်း မှ ...
သို့တိုင်ဂန္ထဝင်ပုံး ဦး ထုပ်၏သမိုင်းကိုမသိကြသလော ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပါလိမ့်မယ်
ဇွန်လ 09, 2021
တံငါသည်များနှင့်လယ်သမားများကိုရာသီဥတုဆိုးရွားမှုမှကာကွယ်ရန်မွေးဖွားခဲ့သောစစ် ဦး စီးချုပ်၏အဝတ်အထည်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ဦး ထုပ်သည်ယနေ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြယ်ပွင့် လမ်းမကြီး နှင့်သူတို့၏စင်္ကြံပေါ်ဒီဇိုင်နာများအတွက်လှုံ့ဆော်မှု။ သင်ဤနွေရာသီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမိုသိလိုပါကဤစာမူကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်!
SOMA စုဆောင်းမှု - ဤအနုပညာဆန်ဖရန်စစ္စကိုရပ်ကွက်၏မြို့ပြပုံစံဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောနေကာမျက်မှန်များ
ဇွန်လ 08, 2021
သငျသညျစကားလုံးကြားလျှင် sum မင်းဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ စိတ်ထဲပထမဆုံးရောက်လာတာကငါတို့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်စုဆောင်းမှုပဲ gafas က de sol အထင်ကရဆန်ဖရန်စစ္စကိုရပ်ကွက်အတွင်းကမှုတ်သွင်း "စျေးကွက်၏တောင်ဘက်" ကောင်းပြီ, သင်ကမှန်ကန်တယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြောချင်သောအရာအားလုံးကိုပြောပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်လိုအပ်သည် SOMA စုဆောင်းမှု သင်၌ဥစ္စာရှိသေးသလော။
သင်၏ကာကွယ်မှုကိုကာကွယ်ပါ Hanukeii ဒီနွေရာသီမှာအကြံပြုချက်တချို့!
The နွေရာသီ နှင့်အတူ, စောင့်ဆိုင်းသောထောင်ပေါင်းများစွာ၏အစီအစဉ်များ၏ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားခြင်း! ဒါကြောင့်မို့လို့သင့်ရဲ့မျက်မှန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့စာရင်းပြုစုထားတယ် Hanukeii သူတို့ကိုပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ် misplace စေခြင်းငှါပြင်ပအချက်များ။ မင်းရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုပေးတဲ့ post ကိုမင်းမတွေ့ခဲ့ဘူး နေကာမျက်မှန်, မင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကကော။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်။ ။ စပိန်နိုင်ငံရှိမူရင်းဟိုတယ် ၅ ခု
မကြာမီသောကြာနေ့ရောက်တော့စပိန်နိုင်ငံရှိမူရင်းဟိုတယ် ၅ လုံးနှင့်သင့်အတွက်စာရင်းပြုစုထားသည်။ ပြီးတော့ 'မူရင်း' လို့ပြောတဲ့အခါတည်းခိုခန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့ပြောတယ်။ အိပ်ပျော်နေသောကြယ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမှသည်တောအုပ်အလယ်၌နိုးထခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းထိုးပါသလား ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
မင်းရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအသုံးချနိုင်တဲ့မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ခေတ်မှီကော်ဖီဆိုင် ၅ ခု။
ကော်ဖီသောက်မလား? ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင်သင့်အားသင်ငြင်းပယ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်အဆိုပြုထားသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလှုံဆော်ပေးနိုင်သောကော်ဖီဆိုင် ၅ ခန်းစာရင်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကကူးစက်ပါစေနှင့်မက်ဒရစ်ရှိဤထူးခြားသောနေရာများခံစားပါ။ မင်းရဲ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတပွဲတော် ၅ ခု! မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်သင်၏နောက်ဖြစ်ရပ်အတွက်အဆင်သင့်ရ
ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် 2020 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဂီတပွဲတော်များကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့တွေပြန်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ငါတို့ဆောင်းပါးမှာမင်းကအကောင်းဆုံး ၅ ယောက်ကိုငါတို့ယူလာပြီ ဂီတပွဲတော်များ ကမ္ဘာ၏, ပြန်လာကြလိမ့်မည်သူများနှင့်သူတို့အား ရူပ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေထက်ပိုပြီးရဲရင့်တယ်။
Halston နဲ့မင်းမတွေ့သေးဘူးလား။ အကယ်၍ သင်သည်ဖက်ရှင်ဆန်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤ Netflix miniseries ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်
သငျသညျ၏ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်လျှင် မိုးတား ပြီးတော့ဒီgigရာမတီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့စီးရီးတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရတာနှစ်သက်တယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုဒီဆောင်းပါးအသစ်မှာသင်ပေးတယ် Halston နှင့်သူ၏မကြောက်တရားဘဝ။
မှန်ပါသည်၊ နေကာမျက်မှန်အမျိုးအစားများရှိသည်! ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်သင်၏မျက်စိကိုကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့နေကာမျက်မှန်ကို ၀ ယ်တဲ့အခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အမျိုးအစားတွေကိုသိဖို့ဒီဆောင်းပါးကိုငါတို့ဖန်တီးခဲ့တာ။
၉၀ ပြည့်ပြီ။ ဒီ 90 နောက်တဖန်ယိမ်းဖြစ်ကြောင်း5မတ်မတ်
ဖက်ရှင်သည်အချိန်ကာလအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးဖြစ်သည်။ သင်မက်ဒရစ်ရှိ Gran Víaကိုသွားပြီးဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုတွေ့တာမင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား အလွန်အကျွံ သားရေနှင့်သင် 90 ၏အချို့ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး၏ဇာတ်ကောင်ကိုကြည့်ခံစားရပါသလား? အရာရာတိုင်းပြန်လာနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာဖက်ရှင်သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများအရပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မည်သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ၂၀၂၁ တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်ကိုရှာဖွေပါ
Alexa Chung သိလား။ ငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဒီဒီဇိုင်နာနဲ့စာရေးဆရာ!
ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကမင်းနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိမှာသေချာတယ်။ သူ၏အခွက်တဆယ်သည်ပြိုင်ဘက်ကင်း။ ထောင်နှင့်ချီသောလူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စတိုင်လ်၏စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပို့စ်တွင် Alexa Chung အကြောင်းသင်တွေ့ရှိနိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။ ငါတို့ Hanukeii ရက်သတ္တပတ်၏မိန်းကလေး!
သင်၏ Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည့်မက်ဒရစ်တွင်အလှပဆုံးစျေးကွက်များ
In Hanukeii ကျနော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေများအတွက်အစီအစဉ်ရှိသည်! မက်ဒရစ်လမ်းတွေပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာတဲ့စျေးကွက်ကိုမင်းမမှတ်မိဘူး။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၄ ခုအကြောင်းပြောပြပါမည်။ သင်၌သူတို့လုပ်နိုင်သည့်ထူးခြားသည့်အရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများများစွာရှိသည်။ သင်ကဲ့သို့သောထူးခြားသောနေရာများ၊
ပိုများသောနေရောင်ခြည်ကို? မွန်းလွဲပိုင်းအတွက်ပိုအချိန်!: မက်ဒရစ်အတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်5။
မက်ဒရစ်လိုမိုးကောင်းကင် ... အနည်းငယ်! ရာသီဥတုကောင်းသောရာသီရောက်လာပြီးအပူသည်ငါတို့ခေတ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အနားယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မြို့မှာသူငယ်ချင်းများနှင့်ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းအစီအစဉ်ကိုခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတနင်္ဂနွေကိုသင်လည်ပတ်နိုင်မယ့်မက်ဒရစ်မှာအကောင်းဆုံးအခေါင်မိုးငါးခုကိုပြသပါတယ်။
တစ်နှစ်တာအတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုတာဟာနေကာမျက်မှန်တပ်တာကိုရပ်လိုက်တာပါပဲ။ အချိန်တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောအသစ်သော၊ ဒါဟာစတိုင်ထဲကဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ မင်းတို့သာရှာတွေ့နိုင်သောနေကာမျက်မှန်များတွင်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံများကိုပြသသည် Hanukeii.